Xiaomi Mi Max2ရဲ့ ထူးခွားခကျြက ဘာလဲ ? – Sunthit Myanmar
Xiaomi ဟာ မကျြနှာပွငျကွီးကွီးနဲ့ စမတျဖုနျးအသုံးပွုသူမြားအတှကျ Mi Max ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈထဲက စတငျမိတျဆကျရောငျးခခြဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုမြားရယူခဲ့ပါတယျ။ Xiaomi အနနေဲ့ Mi Max ရဲ့ အောငျမွငျမှုကို ထပျမံမွှငျ့တငျဖို့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ မလေ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ Mi Max2ဆိုတဲ့ Mi Max series ရဲ့ ဒုတိယမွောကျမြိုးဆကျအဖွဈနဲ့ ထပျမံ မိတျဆကျလိုကျပါတယျ။
Mi Max2ဟာ Mi Max series ကို upgrade လုပျထားတဲ့ စမတျဖုနျးအမြိုးအစားဖွဈပွီး ဒုတိယမွောကျမြိုးဆကျအဖွဈနဲ့ လုပျဆောငျခကျြအသဈတှကေို ထပျမံပေါငျးစပျထားပါတယျ။ ထူးခွားခကျြကအနနေဲ့ အရငျဆုံး ကငျမရာပိုငျးကို ပွောခငျြပါတယျ။
Mi Max2ရဲ့ ကငျမရာပိုငျးစှမျးဆောငျခကျြဟာ မွငျ့မားလာပါတယျ။ အရငျ Mi Max ရဲ့ ကငျမရာပိုငျးနဲ့ကို ဘာမှ မဆိုငျပါဘူး။ Back camera ကို 12 MP ရှိတဲ့ Sony IMX 386 သုံးထားပေးတာ ကွောငျ့ အလနျးစားဓာတျပုံတှေ ရိုကျနိုငျမှာပါ။ Mi6မှာသုံးထားပေးတဲ့ ကငျမရာအမြိုးအစားတူတူဘဲ ဖွဈတာကွောငျ့ ဓာတျပုံရိုကျလိုတဲ့ လုပျဆောငျခကျြ တဈခုထဲနဲ့ Mi6ကို ဝယျစရာမလိုပါဘူး။ Selfie ကတော့ 5MP ဖွဈပါတယျ။
Mi Max2ဟာ 5300 mAh ပမာဏ ဘတျထရီသိုလှောငျနိုငျပွီး အငျတာနကျဆကျတိုကျသုံးမယျဆိုရငျ ၂၁ နာရီအထိ ခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။ ဗီဒီယိုဆကျတိုကျကွညျ့ရငျတော့ ၁၈ နာရီ ခံနိုငျမှာဖွဈပွီး Game ဆကျတိုကျကစားမယျဆိုရငျ ၉ နာရီအထိ ကစားနိုငျမှာပါ။ ဖုနျးဆကျတိုကျပွောမယျဆိုရငျ ၅၇ နာရီ ခံနိုငျမှာ ဖွဈပွီး သီခငျြးနားထောငျရုံဘဲဆိုရငျတော့ ၁၀ ရကျတိတိ ဘတျထရီခံနိုငျပါတယျ။
Xiaomi Mi Max2ဟာ ဘတျထရီသိုလှောငျမှု ပမာဏမြားလာတာဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ကို အားပွနျသှငျးဖို့ အခြိနျကလညျး သာမနျထကျ ပိုကွာပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Quick Charge ဆိုတဲ့ ဘတျထရီကို အမွနျအားသှငျးနိုငျမယျ့ နညျးပညာ ထညျ့သှငျးပေးလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၁နာရီအတှငျး ၆၈ ရာခိုငျနှုနျးအားပွနျပွညျ့စမှောပါ။ အားသှငျးဖို့ USB Type-C အဖွဈ မွှငျ့တငျလိုကျပါတယျ။
Hardware ပိုငျးဆိုငျရာအနနေဲ့ Mi Max2ကို Snapdragon 625 တပျဆငျထားပေးပွီး RAM 4GB နဲ့ 6GB နှဈမြိုး ဝယျယူနိုငျမှာပါ။ Storage ကိုလညျး 64GB နဲ့ 1258GB ဆိုပွီး နှဈမြိုးထုတျလုပျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ မိမိရဲ့ လိုအပျခကျြနဲ့အညီ ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျကိုတော့ ၆.၄၄ လကျမအကယျြရှိပွီး Full HD ဖွဈတဲ့အတှကျ ပုံရိပျတှကေို ပွတျသားစှာမွငျနိုငျမှာပါ။ ဖုနျးရဲ့ မကျြနှာပွငျပိုငျးဆိုငျရာ အနညျးငယျပွောငျးလဲခကျြရှိပါတယျ။ Redmi Pro, Mi5လိုမြိုး မကျြနှာပွငျထောငျ့ဘကျတှေ အနညျးငယျပိုခုံးလာပါတယျ။ Android version 7.0 Nougat ကို MIUI 8 နဲ့ ထောကျပံ့ပေးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Mi Max2ကို MIUI9နဲ့ ထှကျလာဖို့ မြှျောလငျ့မိခဲ့ပမေယျ့ MIUI 8 မှာ feature အခြို့ထပျပေါငျးထညျ့ထားပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ feature တှကေ Mi Max2အတှကျဘဲ ဖွဈပါတယျ။ Split Screen ဆိုတဲ့ လုပျဆောငျခကျြထညျ့သှငျးပေးလာပွီး Work Space View တှဖေနျတီးနိုငျမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ MIUI9ထှကျတဲ့အခါ အရငျဆုံး MIUI9ကို ရရှိနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Mi Max2ကို ဈေးနှုနျးမွငျ့မားခဲ့မယျထငျပမေယျ့ ဈေးနှုနျးကတော့ သငျ့တငျ့ပါတယျ။ RAM 4GB/ 64GB version ကို ၁၆၉၉ ယှမျဖွငျ့ ဝယျယူနိုငျပွီး RAM 6GB/128GB version ကို ၁၉၉၉ ယှမျဖွငျ့ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။ မွနျမာငှဖွေငျ့ တှကျမယျဆိုရငျ RAM 4GB/64GB ကို ၃သိနျးခှဲကြျောခနျ့ရှိပွီး RAM 6GB/128GB ကို ၄သိနျးကြျောမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စစထှကျခွငျး မွနျမာပွညျဈေးကှကျထဲမှာ ဝယျမယျဆိုရငျတော့ လကျရှိဖျောပွထားတဲ့ ဈေးနှုနျးထကျ ၆သောငျး ၇ သောငျးဝနျးကငျြခနျ့ ဈေးကှာခွားနိုငျပါတယျ။
Zawgyi Font : Xiaomi Mi Max2ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာလဲ ?
Xiaomi ဟာ မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးနဲ့ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Mi Max ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲက စတင်မိတ်ဆက်ရောင်းချခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများရယူခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ Mi Max ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ထပ်မံမြှင့်တင်ဖို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ Mi Max2ဆိုတဲ့ Mi Max series ရဲ့ ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ ထပ်မံ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Mi Max2ဟာ Mi Max series ကို upgrade လုပ်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို ထပ်မံပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကအနေနဲ့ အရင်ဆုံး ကင်မရာပိုင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။
Mi Max2ရဲ့ ကင်မရာပိုင်းစွမ်းဆောင်ချက်ဟာ မြင့်မားလာပါတယ်။ အရင် Mi Max ရဲ့ ကင်မရာပိုင်းနဲ့ကို ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ Back camera ကို 12 MP ရှိတဲ့ Sony IMX 386 သုံးထားပေးတာ ကြောင့် အလန်းစားဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်နိုင်မှာပါ။ Mi6မှာသုံးထားပေးတဲ့ ကင်မရာအမျိုးအစားတူတူဘဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုထဲနဲ့ Mi6ကို ၀ယ်စရာမလိုပါဘူး။ Selfie ကတော့ 5MP ဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max2ဟာ 5300 mAh ပမာဏ ဘတ်ထရီသိုလှောင်နိုင်ပြီး အင်တာနက်ဆက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုရင် ၂၁ နာရီအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုဆက်တိုက်ကြည့်ရင်တော့ ၁၈ နာရီ ခံနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Game ဆက်တိုက်ကစားမယ်ဆိုရင် ၉ နာရီအထိ ကစားနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းဆက်တိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် ၅၇ နာရီ ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သီချင်းနားထောင်ရုံဘဲဆိုရင်တော့ ၁၀ ရက်တိတိ ဘတ်ထရီခံနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Mi Max2ဟာ ဘတ်ထရီသိုလှောင်မှု ပမာဏများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို အားပြန်သွင်းဖို့ အချိန်ကလည်း သာမန်ထက် ပိုကြာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Quick Charge ဆိုတဲ့ ဘတ်ထရီကို အမြန်အားသွင်းနိုင်မယ့် နည်းပညာ ထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁နာရီအတွင်း ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းအားပြန်ပြည့်စေမှာပါ။ အားသွင်းဖို့ USB Type-C အဖြစ် မြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။
Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ Mi Max2ကို Snapdragon 625 တပ်ဆင်ထားပေးပြီး RAM 4GB နဲ့ 6GB နှစ်မျိုး ၀ယ်ယူနိုင်မှာပါ။ Storage ကိုလည်း 64GB နဲ့ 1258GB ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကိုတော့ ၆.၄၄ လက်မအကျယ်ရှိပြီး Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံရိပ်တွေကို ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်မှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲချက်ရှိပါတယ်။ Redmi Pro, Mi5လိုမျိုး မျက်နှာပြင်ထောင့်ဘက်တွေ အနည်းငယ်ပိုခုံးလာပါတယ်။ Android version 7.0 Nougat ကို MIUI 8 နဲ့ ထောက်ပံ့ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max2ကို MIUI9နဲ့ ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်မိခဲ့ပေမယ့် MIUI 8 မှာ feature အချို့ထပ်ပေါင်းထည့်ထားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ feature တွေက Mi Max2အတွက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Split Screen ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်းပေးလာပြီး Work Space View တွေဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် MIUI9ထွက်တဲ့အခါ အရင်ဆုံး MIUI9ကို ရရှိနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Mi Max2ကို ဈေးနှုန်းမြင့်မားခဲ့မယ်ထင်ပေမယ့် ဈေးနှုန်းကတော့ သင့်တင့်ပါတယ်။ RAM 4GB/ 64GB version ကို ၁၆၉၉ ယွမ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး RAM 6GB/128GB version ကို ၁၉၉၉ ယွမ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာငွေဖြင့် တွက်မယ်ဆိုရင် RAM 4GB/64GB ကို ၃သိန်းခွဲကျော်ခန့်ရှိပြီး RAM 6GB/128GB ကို ၄သိန်းကျော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစထွက်ခြင်း မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့ ဈေးနှုန်းထက် ၆သောင်း ၇ သောင်းဝန်းကျင်ခန့် ဈေးကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
Published May 26, 2017 By staff
Categorized as News, Tech Tagged mimax2, Xiaomi